musha >Products >Portable fence
Ganda rekushandisa rinoshandiswa kakawanda uye rinoita sarudzo yakachenjera uye inonzwisisika yefenzi pamasikati, mauto emitambo uye county inoratidza. zvakananga kubata uye chaizvoizvo zviri nyore kuisa mukati, iwe uchishandisa danda revinyl sekufambisa rusvingo uye kuvaka masvingo akavharidzirwa, mavakwabhu uye nzvimbo dzakagamuchirwa zvekugamuchira, kana kungoshandisa iyo sechidziviriro chekutonga.
Yakagadzirwa kubva pane zvakasimba zvakasimba, fence inoshandiswa inofambisa uye inodzivirira masvingo iyo haingotaridzi zvakanaka, inobatanidza zvakananga kutarisira. iwe uchapukuta chena chena yakachena uye hairi kuora, warp kana kuparadzaniswa nezera, iri pamwe chete yakazara kusagadzikana kwemamiriro okunze.
Imwe ipurasitiki inoshandiswa inoshandiswa inoshandiswa kwezviitiko zvakasiyana nemimwe mienzaniso inotevera kune dzimwe nzira dzaunogona kuisa fence yepamusoro yePVC kuti ishandise kushandiswa: kuvharwa kwevashanyi, nzvimbo dzakabatanidzwa, uswa hwakakomberedzwa nzvimbo, zvivako zvemazuva mashoma, zvipingamupinyi zvese.
portable pvc fence / portable picket fencing sale
portable pvc fence / yakashandiswa kuchikoro / basa / shopping mall
PVC Temporary fence panels & portable event cence
Gwaro rekuchengetedzwa kwekuchengetedza inogona kunge iri yepamusoro-soro, inotenderera yakachengeteka fence panel system iyo inogona kukurumidza kusimbiswa kuti igadzire nzvimbo yakasimba uye yakachengeteka yakakomberedzwa kana kuti yenguva pfupi yepfini.
Chengetedzo fence panels inogonawo kuunganidzwa mumagadzirirwo akasiyana-siyana, inongotorwa pasi & kubatisisa. Iyo fence panels, hardware nezvimwe zvinhu zvinopisa swaybacked steel galvanized, yakagadzirirwa kugara kwemakore. Iyo inofadza, uye yakasiyana, nzvimbo yakachengetedza nheyo yekusimbiswa kwesimbi, (yakatanga yakagadzirwa neIndaneti yose inofamba inoshandiswa) inopa hunodikanwa hunodikanwa pamativi ese.
Iyi nzira yakasiyana-siyana inopa chikwata chako chakakomberedzwa chakanaka uye chekutarisa, asi kupa chigadziro. iri nyore Fence kuchengetedzwa rusvingo yakanaka kune dzimwe nguva yemajini; zvivako zvekuvaka; kunze kwemashoko anokosha zviitiko; boka revanhu; nezvimwewo.
Nzvimbo yedu yekuchengetedza fence panels inogadzirwa nefekitari kubva kune yakaoma yakagadzirwa netambo iyo inopikisa yakavharwa pamativi ose. kamwechete yakabatanidzwa nechecheche mesh mazhenje kushandiswa kwemaoko ezvigadzirwa zvemaoko ekuputira zvinoshamisa zvakanyanya kamwe shenanigan kana chero nzira yekuvhiringidza yakaedzwa. Nzvimbo dzekuchengetedzwa kwemasvingo mune zvigadziro zvedu zvekuchengetedzwa kwepenjewo zvakare hazvina zvishoma kuti vatasvike vaone kukanganisa.
Nzvimbo yakachengetedzwa uye masuo haasi kusachengetedza mukati mehupenyu humwe. yakasikwa zvachose kubva kune inopisa-yakadzika galvanized steel, pamwe chete inopindurwa neimwe yakasimba yakafukidzwa kupfeka.
Nzvimbo dzepamusoro dzematare dzinongogadziriswa. ivo vakachengeteka uye zvakawanda zviri nyore kupfuura mhando dzisina wireless. iwe uchavashandisa mukati uye kunze uye kuti vanogona kushanda vakafa asi kwete magetsi. Hapana cheaching chero ipi zvayo inodiwa. Pane chimwe chinhu chinopesana, vanobvumira chete nzvimbo yakawanda yemunharaunda uye kana iwe uchida mhando yakanaka, iwe unofanirwa kutarisira kuvakwa kwekunze!
Pamashoko ose embwa waunosarudza pakati, mienzaniso inofamba iri mumutambo wose unonyanya kushandiswa. ivo vachagadziriswa chero nzvimbo chero ipi zvayo yamunoda, asi pamwe chete vachikubvumira kuti uite zvakanakira kupera. imwe imbwa inotakurisa fence ichava yakasimba uye inonzwisisa panguva imwecheteyo. Sezvo zvakadaro, kuzvifungisisa kunogona kuva nheyo yekuchenjera.
Sezvatinofanirwa kugadzirira kutengesa fence inoshandiswa kune imbwa, pane zvimwe zvinhu zvinoita basa rinokosha zvikuru.
Mafurati emagetsi anowanikwa dzimwe nguva anogadzirwa kubva kumatare kana kuti epurasitiki yakasimba uye angave akajairika achiita kuti shandisa nzvimbo yakachengetedzeka iyo yakachengeteka kune zvipfuwo zvako. iyo inongotorwa pasi uye inopindirwa kune chero ipi zvayo yaunoda iri kunze kana mukati memba, ndicho chikonzero vanoverengeka vanogara pamba vanoziva kuti vakagadzikana kamwechete vachigara nemhuka dzemhuka, kana kuti munguva yose yekudzidzisa.
Makomborero ePortable Pet Fences
Zvisingagoneki - Zvishandiso zvinotsamwirwa kubva kuma plastiki anogara, kusvika kune huni nesimbi. kutarisa pamusoro pezvokutengesa uye masvingo akawanda akachengetedzeka akafanirwa nekushandisa mukati nekunze uye anowedzera kusagadzikana.
Zvokuchengetedza - Masvingo akavharidzirwa anoita kuti varidzi veminda vadzimba varambe vaine ziso rakanaka pane zvipfuwo zvavo UN sangano rinogona kupinda mune zvakaipa pane zvakasiyana. iyo ichabereka kuchengeteka yakafanana neyimwe fence yekare, kuburikidza nekuita mhedziso yekuzvidzivirira uye kudzivirirwa.
Inotengeswa - Mitengo ichasiyana yakatarisa pahukuru, zvisinei kunyange zvikepe zvizhinji zvinotakura zviduku zvinotanga kubva kumadhora $ 60 kusvika ku $ 150 vachitarisa pane zvinyorwa. izvi zvinogona kunge zvisingabhadhari kudarika kuisa mufence usingagumi zvakasiyana-siyana.
Mavara Akasiyana-siyana - Mafurati emagetsi anowanikwa achawanikwa ose maumbirwo, ukuru uye zvinhu. nepo mamwe mazhenje anotakura anowanzotadza zvishoma uye ari nyore, mamwe anowanzotyisa zvikuru uye ornante. Vadzidzisi vanozogadzira feni yavo inoshandiswa kuti vatarise zvinodiwa zvechipfuwo chavo uye imba yavo yekugadzirisa maitiro, asi kunyanya kukura uye zvinhu ndezvimwe zvinhu zvinogona kukanganisa kuongororwa kwedanda rakagadzirwa.
Kusiyana-siyana - Zvizhinji zvepfini zvinoshandiswa zvinowanzoshandiswa mukati kana kunze uye zvinoshandiswa pakarepo.
Mafurati anotengesa anopa nyore nyore semugumisiro wekuti dzimwe nguva zviri nyore kuisa-up uye zvinogona kuiswa chero nzvimbo. izvi zvinoreva varidzi nemhuka dzesango hazvifaniri kunyanya kutora pamuviri wekugadzirisa fence kusingaperi kuchengetedza zvipfuwo zvavo.
Zvishandiso zveZvinyorwa Zvitsuwa Zviduku
Pano pane zvimwe zvekuti nzira itsva dzinoshandiswa nevanhu vanoshandisa zvipfigirwe zvematare:
Portable Playpen- kuwedzerwa uye kuwedzerwa zvipfuwo zvepanyama zvinoshungurudza masvingo akavharidzirwa kuti varambe vari ziso rakagadzirirwa pane zvipfuwo zvavo panguva yakachengeteka uye yakasarudzwa nzvimbo. nzvimbo yakakodzera yakavharwa mukati kana kunze kwayo ichaita kamwechete sechirwere chekushandisa chakakosha.
Potty kudzidzisa - Masvingo anonyatsogadzirira achafambisa nekodhi coaching uye makateti ekudzidzisa vana. somuenzaniso pane kuva nekatikati yekatikati, maduku maduku embwa, zvingava nehutano hwehutanda hunotakura hunoiswa mukati kana kunze.
Kadzika neVachipfuwo - Vadzidzisi vekumba vehurumende UN sangano rinosarudza kufamba nemapfupa avo vakawana masvingo ekushandisa kuti ave anobatsira zvikuru. imwe feni inoshandiswa inogona kunge yakave yakanaka zvakasiyana-siyana kana tende raunogara kana gara rekuvaraidza rigara, asi pane kuchengeta chikafu chako pachikwereti iwe uchaita nzvimbo yakachengeteka uye yakachengeteka kuti chipfuwo chako chifare.
Usati wagamuchira Permanent Fence inowanikwa - inoshandiswa pamatare emagetsi anowanzoshandiswa semhinduro yakanaka yechipfuuriro kusvikira ganda rekusingaperi rinowanzogadziriswa. Vadzidzisi vangasarudza kushandisa transportable pet fence asi fence yekusingaperi iri kuiswa mukati.
Nzira Yokuvaka A Portable Fence
Muchikamu ichi, muchengeti watinowanzoita kuti nyaya yacho ive mukati uye kunze kwekuvhara magetsi masvingo.
Kana iwe wakamboita sarudzo shomanana yemagetsi, imwe inoshandiswa magetsi fence system inoshanda yakasimba kwenguva pfupi yekutarisira mhuka shomanana uye kufambisa kufudza. Izvo zviri nyore kuungana nekushandisa-uye inogona kuwedzererwa neGallagher mains, bateri kana solar / betri system.
Iyo inoshandiswa zvikuru yekudzivirira magetsi emagetsi ndeyikuti:
Kuputsa kudyisa mafuro nezvirimwa
Nguva pfupi yekutarisira mhuka
Portable magetsi masvingo ane zvikomborero zvakawanda:
Kutsanya nekutsvaga kwakarurama
Zvakare-kushandiswa / kushandiswa
Unofadza kuenda / kutakura
Hezvino zvinyorwa zvaungada kuti zvive zvekuvhara magetsi:
Pasi (pasi) pasi
Polytapes, tambo kana mashizha
Pasi pane imwe nzira yakarurama yekufamba-famba pane nzira yekusimudza fence yako inoshandiswa:
Connect | the tip} yerapepi kuti iyanane nechidimbu chechikwata chechikwata uye famba uchienda kumucheto wakatarisana wepamuganhu wakatarwa, uchitakura reel uye yakakwana yenguruve yenguva yepfini yakapedzwa.
Bvumira reel kusunungura sezvaunofamba uye ugoisa tsika yepamusoro pamusoro pe15m imwe neimwe (zvichienderana negwaro, kureba uku zvichida kufupika).
Paunosvika padenga guru padhi reel pane chinangwa chechimbo, tsvaga ratchet uye simbisa tambo / tape (usasimbisazve).
Kana uri kushandisa shanduko inoshandiswa inoshandiswa seweGallagher B11 - shandisai unergizer asina ruzivo kukonzera dhigirii dhigirii pasi danda, uyewo energizer oxide kune fence, uye shandurai kuedza.
Kana chinangwa chechimbocho chiine simba pane izvozvi, shandisa simba kune fence inoshandiswa inoshandisa gxNUMX kuenderera mberi.
Zvakakosha kusarudza paine simba rakakwana kuita mamwe masimba akakwana kuvhara kwako zvinodiwa. iyo nzira yekutanga uye yakajeka ndeye simba remasimba kana iri kunze uko, asi rudzi rwekugadzirisa zvakanakisisa rwakagadzirirwa fence yako kunobva pane zviitiko zvinotevera;
Kuwanikwa kwemasimba emunondo kunopa
Nhamba yefence inofanira kuwedzerwa
Mhando yematokari inofanira kuvharwa
Kana paine kupera kwezvirimwa zvakabatikana pamwe chete nedanda rako rinoshandiswa simba rinogonawo kurasikirwa kubva mumupanda, saka kune zvakawanda zvine simba rakasimba rinogonawo kudiwa. bvunza wako mutengesi wekutengesa pamusoro pokusarudza nzira yakakosha yakakwana yepurazi yako.
Majini anogadziriswa anowanzoshandiswa nebhaibheri rebhaibheri rechipiri reV reversible kana kuti 9V Vechenche cell battery rinoshandiswa. Simba rinoshandiswa seGallagher B11 rakagadzirirwa kushandiswa kwemaitiro asina kushandiswa uye rinogona kushandiswa nehafu yezana "D" mabheti emasikirini kana kuti bhaibheri reV V reversible. Mabhatiri anogona kubhadharwa sezvinodiwa kuverenga kuhupamhi hwemhepo, simba rebheteri uye huwandu hwekushandisa. Iyo inoshandiswa S16 energizer inopa kusachengetedza kusina simba rekushanda kwemhepo nebhajitri reteri recharging uye yakakodzerwa nekutora zviyo.
Kana uchinge wakasarudza simba rakakwana kuti uise fence yako, iwe unogona kusarudza tape, tambo kana kusunga nokuti fence "wire". Shandisa Gallagher Poly, kana kuti Turbo merchandise (panzvimbo yepamusoro-soro yakagadziriswa netambo) pamagetsi anokonzerwa nemagetsi semugumisiro wekuti haatomborevi, unooneka uye wakananga kumhepo.
Tape inowanzoshandiswa pose pose pakuonekwa kunokosha. NeGallagher Turbo uye zvakasiyana-siyana tave tawana pane zvatinodzidza nezvepfungwa dzepfungwa nekududzira chiratidzo chekuchenesa kwechisikiro: Mvura. inonzwisisika kuva yakakosha pakuvhara zvikwata. (Cherechedza: Tape haina kuratidzirwa munzvimbo dzinotarisana nemhepo ine simba zvakanyanya Polywire / Turbo Wire inofadza pose apo mhepo kana mhepo inotambudza "ingashanda" tape kuti irege kuora! Kubata kungave chinhu chakavezwa chakagadzirirwa kuti chisati "tangle" kana kuti ronda.)
Portable Fence For Dogs Kana Nzvimbo
Imbwa zvisikwa zvinoda kuziva uye mukati memusango, vachaedza nekuongorora uye kuedza zvinhu zvitsva uye zvinofadza. Zvinosuruvarisa, ichi kazhinji ndicho chikonzero chikuru chakaita kuti imbwa dzakawanda dzakadaro dzidzungirire kure asi dzigare nevadzidzisi vadzo! kuitira kuti uchengetedze izvozvo uye utsire mhuka yako, utakure pfuti yefenzi. Inoda nguva shomanana yekugadziriswa kupfuura tende rako, zvisinei kuti ichaita kuti imbwa yako ive yakachengeteka kubva pakuwana yakarashika uye kuchengetedza mhuka dzomusango dzive dzakachengeteka kubva kwaari, kungova kungoitika kana ari imbwa huru! Nzvimbo dzepamusoro dzematare inopindurwa ndiyo mhinduro yakanaka yekambi; ivo vakareruka, saka kutakura hakuzove dambudziko.
Nemhaka yokuti tine chido chekutarirwa pamadziro anotakura, zviri pachena kuti mutoro unokosha. Asi, kana uri kushanyira kushandisa fence mujeri rako kune zvishomanana zvezvakataurwa, mutoro ndewokuti wechipiri chinonyanya kukosha. Muzvinhu chimwe nechimwe, chiyero ndechokuti nyaya huru yekufungisisa. Zvechokwadi, chiyero chembwa yako chinofanirwa kufungidzirwa, asi kunyange neyechidiki zvimbwa, fensi yakawanda inotakura inotakura yakanaka. Mamashoko akajeka, akawedzera imbwa, yakawanda fence inofanira kuva.
Jovyea inyanzvi yekugadzirwa kweChinese (factory / wholesaler / suppliers) iyo inofunganya nekugadzira, kukura nekugadzirwa kwemapurofiti ekutengeserana .Our industrial chain yakakwana, yakanaka, yakanaka. Zvose zvemiti yedu inoteerera nehutano hwakanaka hwehutano hwemhando, zvigadzirwa zvedu zvave zviri vazhinji vevatengi pamwe chete vanobvumirana.